Izindaba - Lungiselela ukuthuthukiswa kwesayensi nezobuchwepheshe koMkhandlu Wamahhala Wokuhweba ePort Haikou Wokugqugquzela Ukuhwebelana Kwamazwe Ngamazwe kukhuthaza ukubambisana okujulile phakathi kwamabhizinisi aseHainan namazwe omhlaba
Ukwenza lula ukuthuthukiswa kwesayensi nezobuchwepheshe koMkhandlu Wamahhala Wokuhweba ePort Haikou Wokukhuthaza Ukuhwebelana Kwamazwe Ngamazwe kukhuthaza ukubambisana okujulile phakathi kwamabhizinisi aseHainan namazwe omhlaba
Ngosizo loMkhandlu waseHaikou Wokukhuthaza Ukuhweba Kwamazwe Omhlaba, uHainan Huayan Collagen Technology Co, Ltd. usayine isivumelwano sohlaka neDenmark Bio-X Institute kanye neLyngby Scientific ntambama ngoNovemba 20, ukusungula ubambiswano lwamasu.
Kuyaqondakala ukuthi ukusayinwa kwesivumelwano phakathi kwalawa maqembu womabili kukhombisa ukuthi uHainan Huayan uzokwethula ngenkuthalo ubuchwepheshe obuphambili bezokwelapha emhlabeni ngokwakhiwa kwetheku lokuhweba ngokukhululeka, futhi kuphawula nokuthuthuka okusemthethweni kukaHainan emkhakheni wama-peptide wezokwelapha.
IHainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd.yinkampani kazwelonke esezingeni eliphezulu ehlanganisa ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukukhiqizwa nokuthengiswa. Futhi kuyibhizinisi lokuqala eChina ukuzibandakanya ocwaningweni nasekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ama-peptide e-hydrolyzed fish collagen. Ingaphezu kwama-80% imikhiqizo yayo ethunyelwa eningizimu-mpumalanga ye-Asia kanye nasemakethe yaseMelika. I-Danish Bio-X Institute iyinkampani yesevisi yobuchwepheshe be-biomedical ekomkhulu layo eDenmark, enezinsizakusebenza ezaziwa umhlaba wonke kanye nenqwaba yezindawo zokucwaninga nobuchwepheshe bezentuthuko ze-collagen.
Ngasikhathi sinye, uGoo Hongxing, umphathi jikelele weHainan Huayan Collagen Technology Co, Ltd., uthe lokhu kusayina kuzofaka ukusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe kwenkampani ukwenza ngcono ikhwalithi nokusebenza kahle. Sizosebenzisa izinzuzo zenqubomgomo yeHainan Free Trade Port ukwenza ukuthengwa komhlaba wonke kwezinto zokusetshenziswa kanye nokuhlelwa okubanzi kwemakethe yabathengi yomhlaba wonke, futhi silwele ukwakha indawo ephakeme yezobuchwepheshe emkhakheni wama-peptide wemvelo yasolwandle ethekwini lokuhweba mahhala .